चुमनुब्रीका ६ वटा वडा सचिवविहीन - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
चुमनुब्रीका ६ वटा वडा सचिवविहीन
Published On : १८ बैशाख २०७५, मंगलवार ०९:४८
नयाँ संविधान कार्यान्वयन भएर १ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिबाट सेवा सुविधा पाउने भनिए पनि चुमनुब्री गाउँपालिकाका बासिन्दाले सरकारी कर्मचारीबाट सेवा पाएका छैनन्। गाउँपालिकाको ७ वटा वडामध्ये ६ वटा वडा सचिवविहीन रहेको गाउँपालिकाकी उपप्रमुख कुमारी गुरुङ बताउँछिन्। ‘वडा नं. ७ मा चाहिँ सचिव हुनुहुन्छ। उहाँ पनि गोरखाबजारतिरै बस्नुहुन्छ’, गुरुङ भन्छिन्, ‘वडा नं. ६ को काम पनि उहाँले गरिरहनुभएको छ। बाँकी वडामा सचिव छैनन्।’ कसैको बढुवा र कोही सरुवा भएको जानकारी पाएको उनले बताइन्।
वडासचिव नहुँदा सिफारिस लेख्ने, व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने काममा समस्या भएको वडा नं. ४ का अध्यक्ष पेमा डुण्ढुप लामा बताउँछन्। ‘जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, मृत्युदर्ता गर्न समस्या भएको छ’, उनी भन्छन्, ‘पढे÷लेखेका वडाध्यक्ष भए त आफैंले गर्छन्। दुर्गमका धेरै वडाध्यक्षलाई लेखपढ गर्नसमेत आउँदैन। बैठकको निर्णय लेख्न त समस्या छ।’ प्राविधिक सहायकले केही काम टारिरहे पनि घटना दर्ता र चेकमा सही गर्न सचिव चाहिने भएकाले समस्या भएको उनको भनाइ छ।
चीनमा कोभिड-१९ का नयाँ संक्रमित देखिन थालेका छन् । भाइरस पुन: देखिन थालेसँगै आगामी दिनमा